Jubbaland oo ka hadlay ku wareejinta maamulka doorashooyinka RW Rooble | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Jubbaland oo ka hadlay ku wareejinta maamulka doorashooyinka RW Rooble
Jubbaland oo ka hadlay ku wareejinta maamulka doorashooyinka RW Rooble
Wasiirka warfaafinta Dowlad Goboleedka Jubbaland Eng Cabdi Xuseen ayaa ka hadlay mowqifka Maamul goboleedka Jubbaland ee ku wareejinta maamulka doorashooyinka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya.
Eng Cabdi Xuseen oo wareysi siiyay laanta afka soomaliga ee VOA ayaa ku tilmaamay ku wareejinta maamulida doorashooyinka ra’iisul wasaaraha mid qabyo ah balse uu soo dhoweynayo maamulka Jubbalanad.
Ma wada dhamo oo sidii la rabay ma aha in xukunka uu wareejiyo Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, waa laga habboon yahay in uu isku dhajiyo ciidamadii ayaa is hor fadhiya, mana ahayn in uu doorashada keliya wareejiyo, hoggaankii ciidanka ayuu weli hayaa waana in uu saxiixaa warqadda xil wareejinta”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.
Maamulka Jubbaland ayaa ah maamul goboleedkii ugu horeeyay ee ka hadla in Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu iska wareejiyao maamulida doorashooyinka isla markaana aqbalay in dib loogu laabto wadahadaladii teendhada.
Hase yeeshee beesha caalamka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa soo dhoweeyay talaabadii uu qaaday shalay madaxweyne farmaajo
Maqaal horeItoobiya oo u aqoonsatay Ururka TPLF Argagaxiso
Maqaal XigaRa’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay ergeyga dalka Qatar Al- Qahtani